Aqalka Cad ee Maraykanka oo Canbaareeyey qaraxii ka dhacay Sabtidii magaalada Muqdisho. |
Aqalka Cad ee Maraykanka oo Canbaareeyey qaraxii ka dhacay Sabtidii magaalada Muqdisho.
Washinton(GNN):-Bayaan ka soo abxay Aqalka Cad ee looga arrimoyo dalka Maraykanka ayaa si adag loogu canbaareeyey qaraxii ka dhashey gaari nooca xamuulka ah ee maalintii Sabtida, kaas oo ay ku nafwaayeen dad ka badan 300 oo qof, halka dhaawuxcu kor u dhaafayo 400 oo qof.
” Maraykanku waxay si adag u canbaareynayaan, xasuuqii sida macna-darada ah loola eegtey dadka abriyada ah ee rayidka ah rag iyo dumar iyo caruur kaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho, maalintii Sabtida ee 14 Oktoobar” ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Warka ka soo baxay Aqalka Cad ayaa tacsi loogu direy dhamaan qoysaskii iyo qaraabadii ay waxyeeladu soo gaartey.
“Argagixsadu waa cadowga dadka rayidka ah, Maraykanku waxay garab istaagayaan dadka Soomaaliyeed iyo Dowladooda, si looga guuleysto kooxahaas, amniga loo sugi lahaa, ayaa lagu yiri War saxaafadeedka Aqalka Cad.
Madaxweynaha Maraykanka oo caan ku ah in uu bartiisa Twitterka uga ahdlo arrimo kala duwan ooc aalmak ka mid ahaa ayaan weli ka hadlin.
Horey waxaa u canbaareeyey Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka iyo Safaaradda Maraykanku Soomaaliya ku lee yahay.